Ukubuka kolwandle kwe-Philippine ekhaya okungavimbekisiwe Loft|Bose audio|Floor-to-ceiling windows|Isitayela sase-Japanese esilula|3 amaminithi olwandle|iphrojekthi|ihlanzekile futhi inethezekile - I-Airbnb
Ukubuka kolwandle kwe-Philippine ekhaya okungavimbekisiwe Loft|Bose audio|Floor-to-ceiling windows|Isitayela sase-Japanese esilula|3 amaminithi olwandle|iphrojekthi|ihlanzekile futhi inethezekile
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-菲菲
U-菲菲 Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lisendaweni yokuhlala ephezulu enendawo engenakuqhathaniswa.Izitezi eziphakeme kakhulu eziphakeme kakhulu kanye nemigqa yokubona engavimbekiyo ikuvumela ukuthi ubambe ukubuka kolwandle, ukuphuma nokushona kwelanga ngaphandle kokushiya ikhaya.
Ngesikhathi esifanayo, igumbi lifakwe i-projektha, umshini wokuwasha, umsindo we-Bose, izinto zangasese ezingenisiwe, ukukunikeza isipiliyoni sokuphila esinethezekile nesiphumuzayo kanye nokufudumala kwekhaya. Kuyisinqumo sakho esingcono kakhulu sohambo olufushane noma ukuhlala isikhathi eside.
Igumbi yisakhiwo se-Loft esiyi-duplex esinendawo ecishe ibe ngamamitha-skwele angama-80 phezulu naphansi.
Izinsiza ezizungezile seziqediwe, ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya eSunshine Town, izitolo ezinkulu, amasinema, izinkundla zokudlala zezingane, i-Starbucks, njll. Hamba imizuzu emi-5 ukuze ufike ogwini, umzila wezindiza osaziwayo we-Rainbow Marathon. Amabhayisikili angaqashwa eduze kwe-Rainbow Track, futhi ukugibela ogwini lolwandle kumnandi kakhulu.
Ngemva kokuhamba kwamanzi aphansi, ukuhamba ogwini lolwandle nokumba amagobolondo kuyizintelezi eziyingqayizivele kanye nokuhlangenwe nakho kwamadolobha asogwini.
Amahhotela azungezile ezinkanyezi ezinhlanu angafinyelelwa ngohambo lwemizuzu engu-5. Itiye lantambama, i-buffet, indawo yokubhukuda kanye ne-bowling alley kukubiza!
4.89 · 321 okushiwo abanye
Izinsiza ezizungezile seziqediwe, ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya eSunshine Town, izitolo ezinkulu, amasinema, izinkundla zokudlala zezingane, i-Starbucks, njll. Hamba imizuzu emi-5 ukuze ufike ogwini, umzila wezindiza osaziwayo we-Rainbow Marathon. Ungakwazi ukuqasha amabhayisikili ku-Rainbow Track bese ugibela ogwini lolwandle.
Ngemuva kokuhamba kwegagasi eliphansi, ukuhamba ogwini lolwandle nokumba amagobolondo konke okuhlangenwe nakho emadolobheni asogwini.
Uhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka emahhotela ezinkanyezi ezinhlanu anjenge-Marriott ne-Renaissance. Itiye lantambama, i-buffet, i-swimming pool kanye nomgwaqo we-bowling kuyakubiza~
Wamukelekile ukuthi uhlale ekhaya lika-Feifei, futhi sizimisele ukuxhumana nezivakashi nganoma yisiphi isikhathi phakathi nokuhlala kwakho.
U菲菲 Ungumbungazi ovelele
Ukuzingenela nge I-Smart lock, ikhiphedi